Need Help Immediately !
Subject: Need Help Immediately ! Tue Apr 20, 2010 1:39 pm
Previously I was using Dual Boot of Window Vista and Ubundu !
When I replaced Window Vista with Seven , i couldn't seen Boot Device and don't know how to log in Ubundu until right now !
Does anybody experienced like that before ?
Subject: Re: Need Help Immediately ! Tue Apr 20, 2010 4:32 pm
Windows7 ကိုတင်လိုက်တော့ Linux BootLoader location နေရှာမှာ Windows က overwrite လုပ်လိုက်လို့ပါ။
Ubuntu အခွေကိုထည့် Repair လုပ်လိုက်ရင်၊ Linux Boot Loader က
စက်မှာရှိတဲ့ Linux နဲ့ Windows partition ကို detect လုပ်ပြီး...
ဟုတ်တယ်ဗျ။ ကျွန်တော်လည်း နဂိုတုန်းက အဲလိုမျိုး ခဏခဏဖြစ်တယ်။ Dual တင်ထားတာ။ Windows အရင်တင်။ ပြီးတော့ linux တင်။ နောက် ကိုယ်က အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့် Windows ကို repair လုပ်လိုက်ရင် linux က ပျောက်သွားရော။
ဟူးးးး။ အဲတော့ တစ်ခါ linux ကို အစကနေ ပြန်တင်။ repair ပေါ့နော်။ အဲလိုလုပ်ကတယ်။ ပထမတော့ လုပ်နိုင်ပေမဲ့ နောက် ခဏခဏ အဲလိုလုပ်နေရတော့ အချိန်အရမ်းကုန်တယ်၊ မဟုတ်သေးဘူး၊ နည်းတော့ ရှိကမယ်လို့တော့ တွေးလာမိတယ်။
အမှန်က အဲလိုဖြစ်နေတာ Boot Loader ပြဿနာပါ။ OS တစ်ခု boot တက်ဖို့ MBR မှာ ရှိတဲ့ boot loader က ဆွဲပေးရတယ်။
ကျွန်တော်တို့ Windows တင်ရင် MBR မှာ windows boot loader က သွားထိုင်နေတယ်။ ( boot.ini, ntldr ပေါ့၊ အဲ . . ဒါကအလွယ်ပြောတာနော်။ အကုန် မမှန်ဘူး။ )
နောက် Linux တင်ရင် MBR မှာ Linux Boot loader က ရောက်သွားတယ်။ GRUB ပေါ့။ နဂိုတုန်းကတော့ LILO ပေါ့။
အခုဖြစ်နေတာက ကျွန်တော်တို့ windows တင်တယ်။ MBR ထဲမှာ windows boot loader က သွားထိုင်နေတယ်။ နောက် dual အတွက် Linux တင်တော့ MBR ထဲကို GRUB က ရောက်သွားတယ်။ GRUB က Windows boot loader ကို မဖျက်ပြစ်ဘဲ Windows boot loader ကို ငုံထားတယ်။ အဲဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ boot တက်ချိန်မှာ ရွေးလို့ရတာ။ boot တက်ချိန်မှာ GRUB က ပေါ်လာပြီး ဘယ် OS နဲ့ တက်မလဲမေးတယ်။
Linux နဲ့ တက်မယ်ဆိုရင် GRUB က ဆက်လုပ်သွားတယ်။ windows နဲ့ တက်မယ်ဆိုရင် GRUB က windows boot loader ကို လွှဲပေးပြီး ဟိုက ဆက်လုပ်သွားတယ်။
အခုဆို MBR မှာ နှစ်ခုရှိနေပြီ။ GRUB က အပေါ်က။ Windows boot loader က အောက်က။ GRUB က သူ့ကို ငုံထားတယ်။
ဒီအချိန်မှာ တစ်ခုခုကြောင့် windows ပြန်တင်သည် ဖြစ်စေ၊ repair လုပ်သည်ဖြစ်စေ dual တင်ထားရာမှာ linux က ပျောက်သွားလိမ့်မယ်။ တကယ်တော့ Linux ပျောက်သွားတာ မဟုတ်ဘဲ Linux boot loader ပျောက်သွားပြီး linux ကို boot မလုပ်နိုင်တော့တာပါ။
Windows ပြန်တင်လိုက်တော့ windows boot loader က MBR ကို ရောက်လာပြီး နဂိုရှိနေတဲ့ boot loader ကို overwritte လုပ်သွားပါတယ်။ GRUB က overwrite လုပ်ချင်းကို ခံလိုက်ရပါတယ်။ GRUB ပျက်သွားတော့ သူ ငုံထားတဲ့ အဟောင်း windows boot loader လည်း ပျက်သွားတာပေါ့။
အမှန်က linux ပြုတ်သွားတာ မဟုတ်ပဲ GRUB က overwrite လုပ်ချင်း ခံရလို့ linux တက်မလာတာပါ။
အဲမှာ ကျွန်တော်တို့က linux ကို repair ပြန်ပြန်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ repair လုပ်တော့ grub က ပြန်ရောက်လာပြီး linux ပြန်သုံးလို့ရသွားတာပေါ့။ တကယ်တော့ linux ကြီးတစ်ခုလုံးကို repair မလုပ်ဘဲ grub ကိုသာ repair/restore လုပ်မယ်ဆိုရင် ပိုကောင်းတာပေါ့။ ပိုမြန်တာပေါ့။
ဘယ်လို လုပ်ကမလဲဆိုတာ [URL="http://www.sorgonet.com/linux/grubrestore/"]ဒီမှာလေး[/URL] ကြည့်ကြည့်ပါ။ နောက် GRUB restore/repair လို့ googling ရင်လည်း တွေ့ပါလိမ့်မယ်။
( ကျွန်တော်ကတော့ အရှည်ကြီးရေးလိုက်ပါပြီ။ အကုန်လုံးကတော့ ဒါတွေသိပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ ဒါပေမဲ့ မသိရသေးတဲ့သူတွေ ဖတ်မိရင် အဆင်ပြေအောင်ဆိုပြီး ရေးလိုက်ပါတယ်။ dual တင်ထားရာကနေ linux ကြီး ပျောက်ပျောက်သွားတာက ကြုံတတ်ကြတယ်လေ။ )
Subject: How to restore Grub fromalive Ubuntu cd. Tue Apr 20, 2010 4:37 pm
- boot with your Ubuntu CD
- choose English Lauguage
- click on "Try Ubuntu without any change to your computer" in Menu
- get Ubuntu Desktop
Subject: Thz Wed Apr 28, 2010 9:45 pm
Subject: Re: Need Help Immediately ! Fri May 14, 2010 8:26 am
Subject: Re: Need Help Immediately !